जाडोको समयमा पौडी खेल्नाले बच्चाहरूलाई हानि पुऱ्याउँदछ ? र क्लोरीन हालेको पानीको बारेमा के छ ?
मेरो १ वर्षको सुतेको बेलामा वान्ता गर्छ, यसको कारण के हुन सक्छ ?
के कुराले केटाकेटीको टाउको दुख्न सक्दछ ?
शिशुहरुमा हुने थाइराइडको कम स्रावको परिणाम के हो ? के कारणले यस्तो हुन्छ ?
म मेरो बच्चालाई तनाबबाट बचाउन र व्यवस्थापन गर्न सक्छु ? र चिन्ताबाट हुने टाउको दुखाईबाट पनि ?
बच्चाहरुलाई ज्वरो आएको बेलामा पेट दुख्नु सामान्य हुन्छ ?
मेरो दुई बर्षकी छोरी आज बिहान बिहानै भर्याङबाट लडिन् । साँझमा उनको धेरै नराम्रोसँग गन्हाउने सेतो दिसा गरिन् ।
के मैले मेरो बच्चालाई रोटाभाइरसको खोप दिनपर्छ ?
यदि मलाई मेरो बच्चाहरुको मानसिक, व्यवहारिक, वा भावनात्मक लक्षणहरूको बारेमा चिन्ता भयो भने मेरो बच्चालाई सहयोग गर्न मैले को सँग सल्लाह लिनुपर्छ ?
१० महिनाको बच्चालाई प्रत्येक दिन ६ वा ७ पटक बाडुली लाग्छ